အပတ်စဉ်ကဏ္ဍများ, 07 ဒီဇင်ဘာ 2018
7 ဒီဇင်ဘာ 2018 သောကြာ
07 ဒီဇင်ဘာ၊ 2018
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trumpက သူ့အပေါ်လူထုထောက်ခံမှုစံချိန်တင်ကျဆင်းရတာဟာ ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့်ဆိုပြီး ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအဂတိလိုက်စားမှုဟာ ကြီးမားတဲ့အတားအဆီး အဟန့် အတားတခု ဖြစ်နေတယ်လို့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ပေးပို့တဲ့သဝဏ်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခမ်းအနားနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်း ကိုထက်အောင်ခန့်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
Golden Gate တံတားကြီးပေါ်က အဆုံးစီရင်မှုများ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က Golden Gate တံတားကြီးဟာခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်လေ့ရှိပြီး လူအများစုအတွက် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာရဲ့အံ့ဖွယ် (၇) ခုထဲပါနေပေမယ့်လူတချို့အတွက်တော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ရာ နေရာတခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ Valdya Baraputri ပေးပို့တဲ့ သတင်းလွှာကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဆက်လက်ပြီး ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖေါ်ပြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတချို့ကို မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
06 ဒီဇင်ဘာ၊ 2018
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ဈာပန
ကွယ်လွန်သူအမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ နိုင်ငံတော်ဈာပနအခမ်းအနားကို ဝါရှင်တန်မြို့တော်၊ အမျိုးသားဘုရားကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ကကျင်းပခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေ တက်ရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Patsy Widakuswara သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းကတင်ပြပါမယ်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပံ့ပိုးမှု
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရှေ့ဆက်တိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ဘယ်လိုအကြံပေးထားသလဲ ဆိုတာကို VOA ၀ိုင်းတော်သညး ကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro MARUYAMA တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ဒုတိယပိုင်းမှာ တင်ပြထားပါတယ်။
OPEC ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ရေနံထုတ်လုပ်မှု လျော့ချရေး အလားအလာ
ရေနံတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC ခေါင်းဆောင်တွေ Austria နိုင်ငံ Vienna မြို့တော်မှာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးနေကြတာမှာ ရေနံထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချဖို့ သဘောတူကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် Zlatica Hoke ရဲ့သတင်းကို မစုမြတ်မွန်က ပြောပြပါမယ်။
တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား၂နိုင်ငံအကြား ရထားပြေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ အကြောင်းနဲ့ တရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရထားလမ်းဖေါက်လုပ်ဖို့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံက သဘောတူလိုက်တဲ့အကြောင်း Schuyler Ogdenရဲ့ သတင်းလွှာကို ကိုကျော်အောင်လွင် တင်ပြပေးမှာပါ။
သတင်း အကျဉ်းချုပ် (၁၂-၀၆-၂၀၁၈)
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၈ - မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာ တရုတ်ပါဝင်မှု တိုးပွားလာပုံကို ဦးအောင်ခင်က သုံးသပ်ပြီး ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်နဲ့အတူ တင်ပြထားပါတယ်။